IDRA-21 पाउडर के हो?
तपाईलाई किनार दिन सक्ने केहि चीजको लागि सधैं हेरचाहमा रहनु यो सम्पूर्ण मानव हो। कसैको राम्रो प्रदर्शनको लागि, बहुमतले अब स्मार्ट ड्रग्समा परिवर्तन गर्दैछ, जसलाई नूट्रोपिक्स भनिन्छ। तपाईं सम्भवत धेरै पूरकहरू भेट्टाउनु भएको छ जुन कसैको मानसिक प्रदर्शनलाई बढावा दिन्छ भनेर दावी गर्दछ तर के तपाईंले आफैलाई सोध्न छोड्नुभयो जुन कुन काम गर्दछ? IDRA-21 बेन्जोथियाडाइजाइन रासायनिक संरचनाबाट निकालिएको औषधि हो। त्यस्ता दावीहरू छन् कि IDRA-21 Aniracetam सँग सम्बन्धित छ, अर्को Nootropic जुन IDRA-21 भन्दा तीस गुणा कमजोर छ। तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि IDRA-21 एक नोट्रोपिक हो कि वार्तालाप गर्छ। यो एक उत्कृष्ट नूट्रोपिक्स हो जुन पन्चलाई प्याक गर्दछ जब यो आउँदछ तपाईंको स्मृति, प्रेरणा, सोच प्रक्रियाहरू, र तपाईंको उत्पादकता सुधार गर्न। यो बजारमा नयाँ छ, र अझ बढी बुझ्नको लागि अझै अनुसन्धान जारी छ 22503-72-6 मेमोरी, संज्ञानात्मक क्षमता, र संज्ञानात्मक घाटा को उल्टो पार्ने प्रभाव।
कसरी IDRA-21 ले काम गर्दछ?
एक एम्पाकिन औषधिको रूपमा, IDRA-21 मस्तिष्कमा ग्लूटामेट AMPA रिसेप्टर्सको सकारात्मक allosteric मोडुलन मार्फत काम गर्दछ। AMPA रिसेप्टर्सले द्रुत synaptic प्रसारणको कारणले, त्यहाँ उत्साही synaptic शक्ति वृद्धि भएको छ। यसलाई Allosteric सक्रियता पनि भनिन्छ।
सिफारिश गरिएको खुराक / आईडीआरए २१ का उपयोग निर्देशन
जहाँसम्म आईडीआरए २१ लाई जनावरहरूमा मात्र परिक्षण गरिएको छ, धेरै व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गरिसकेका छन्, र अन्य अझै सम्म छन्। एक लोकप्रिय नूट्रोपिक हो, धेरै व्यक्तिले सबै भन्दा राम्रो खुराकको बारेमा कुरा गरेका छन् जसले अधिकतम परिणाम दिन्छ। धेरै स्रोतहरु सुझाव दिन्छन् कि IDRA-21 खुराक m 10 घण्टा भित्र १०mg सम्म हुनुपर्छ। तपाईंले यसलाई या त भोजनको अघि वा पछि लिन सक्नुहुनेछ किनकि यो पानीमा घुलनशील छ र यसलाई उपभोग गर्न केवल एक गिलास पानी आवश्यक पर्दछ। यदि यो nootropic को साथ तपाइँको पहिलो भेट हो भने, यसलाई कम IDRA-48 खुराकमा सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ। तपाईं त्यसपछि बिस्तारै यसलाई बढाउन सक्नुहुनेछ जब तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंको शरीरले यसको प्रयोगको साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया गर्दैन। IDRA-21 नूट्रोपिक स्ट्याक यस तथ्य को बाहेक कि तपाइँ आईडीआरए -२१ यसको आफ्नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई अन्य संग संयोजन गर्न को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ nootropics वा पूरक अधिक संज्ञानात्मक लाभ काट्न। सम्भावित excitotoxicity र पर्याप्त अनुसन्धान को कमी को कारण, तपाइँ यसलाई मा ढिलो जानु पर्छ। हामी Aniracetam जस्तै कुनै अन्य ampakine औषधि संग IDRA-21 को स्ट्याकि recommend सिफारिस गर्दैनन्। अन्य nootropics कि ग्लूटामेट स्तर बढाउन बाट पनि बच्नु पर्छ।
IDRA-21 का फाइदाहरू के छन्?
कुनै पनि प्रेरित व्यक्तिले उत्पादकत्व बढाएको छ। उदाहरणका लागि, लिनुहोस्, यदि तपाइँसँग तपाइँको दिन दिन गतिविधिहरूमा तपाइँको उत्तम प्रदर्शन गर्न ड्राइभ छ भने, तपाइँ सम्भवतः तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईंसँग कुनै गतिविधि गर्न प्रेरणा छैन भने, तपाईंले आफ्नो विकास सम्भावनाहरूलाई हानी गर्नुहुन्छ। एउटा IDRA-21 लाभहरू के यो यसले सुधारित उत्प्रेरणातर्फ जान्छ जुन फलस्वरूप दक्षता बढाउँछ र उत्पादकता बढाउँदछ। नतिजा रूपमा, तपाईं आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ बिना महसुस गरी आफैलाई पनि कडा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ।
कार्य सटीकता बढाउनुहोस्
हामी सबैलाई थाहा छ कि परिपूर्ण परिणामहरूले केवल प्रयास मात्र गर्दैन। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ तपाइँ सबैमा राख्नु हुन्छ तर बुझ्नुहोस् कि तपाइँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न १००% शुद्धता। राम्रो कुरा हो IDRA-21 पाउडर तपाइँले चाहानु भएको सटीक परिणामहरू पूरा गर्न आवश्यक एकाग्रता र ध्यान दिएर ग्यारेन्टी गर्दछ। कडा परिश्रमका साथ संयुक्त, तपाईं आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं उच्चतम डिग्री सटीकता पाउनुहुनेछ।
छोटो अवधिको मेमोरीमा वृद्धि हुन्छ
तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा, तपाईंले यो महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईंको छोटो अवधिको मेमोरी पहिलेको जस्तो तेर्सो छैन। तपाईं सबैभन्दा स्पष्ट चीजहरू पनि बिर्सनुभयो, र यसको काउन्टर गर्न, छोटो नोट वा नोटहरू बनाउँदा तपाईंको साथी बन्छ। जब तपाईं समस्यामा पर्नुहोला कि तपाईंको छोटो अवधिको मेमोरी फेरि कहिलै पनि त्यस्तो नहुन सक्छ, त्यहाँ डराउनुपर्दैन। त्यो किनभने तपाईं आफ्नो छोटो अवधि मेमोरी कुनै समय तपाईं बढ्न सक्नुहुन्छ। को प्रयोग 22503-72-6 तपाईले गर्न सक्ने एक प्रभावकारी तरिका हो छोटो अवधिको मेमोरी गुमाउने समस्याहरूको सामना गर्नुहोस्। यसमा अम्नेसियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिनु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन। यसको प्रयोगको साथ, तपाईं आफ्नो दैनिक जीवनमा तपाईंलाई के आवश्यक छ याद गर्न सक्नुहुन्छ।
डिप्रेसनमा केहि चिकित्सीय प्रभावहरु छ
के तपाइँ दुखी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, लगातार चिन्ता, वा तनाव अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँको भूख कम भयो? के तपाइँ सुत्न को लागी संघर्ष गर्नुहुन्छ? यदि तपाइँको जवाफ हो हो, तब तपाइँ अवसाद बाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाइँ सायद जान्नुहुन्छ, अवसाद नकारात्मक तपाइँको जीवन लाई असर गर्न सक्छ, तपाइँ तपाइँको पूर्ण क्षमता सम्म पुग्न सक्नुहुन्न। सौभाग्य देखि, यो IDRA-21 को उपयोग संग यसलाई हटाउन गाह्रो छैन। तपाइँको मस्तिष्क को एक बढावा दिएर, यो तपाइँ अवसाद संग लड्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै, यो एक चिकित्सीय प्रभाव छ कि तपाइँ राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनी पनी तपाइँ चिन्ता मा रमाईलो जस्तो लाग्छ।
बढेको मानसिक ध्यान
यदि तपाइँ उत्कृष्ट प्रदर्शन चाहानुहुन्छ भने एक विस्तारित अवधिको अवस्थित अविवादितको लागि ध्यान दिने क्षमता सर्वोपरि महत्त्वको छ। यदि तपाईंले बुझ्नु भयो कि तपाईंको ध्यानाकर्षण अवधि भरपर्दो छ, तब तपाईं IDRA-21 प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। IDRA-21 समीक्षा अनलाइनबाट, त्यहाँ दावीहरू छन् जुन यसले तपाईंलाई कार्यमा रहन मद्दत गर्दछ र यसलाई ध्यान दिन यो योग्य छ। किनभने यसले बाह्यमा सबै गडबडीहरू भएता पनि मानसिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ।
कसैको संवेदी धारणामा वृद्धि
संवेदी धारणा सबैलाई हुनु पर्ने छैठौं इन्द्रियको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। यो चीजहरू बुझ्न र तपाईंको वरिपरिको संसारलाई राम्रो तरिकाले बुझ्ने क्षमता हो। आईडीआरए २१ ले तपाईंको संवेदी धारणाले तपाईंलाई तीव्र बनाउँदछ।
धेरै न्यूरोलजिक अवस्थाहरूको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउँछ
आज, आईडीआरए २१ को प्रयोग वृद्धिका प्रक्रिया, संज्ञानात्मक बिग्रन, अल्जाइमर रोग, र पार्किन्सन रोग जस्ता धेरै न्यूरोलॉजिकल अवस्थाबाट पीडित बिरामीहरूको उपचार र हेरचाहमा समावेश गरिएको छ।
हाम्रो संज्ञानात्मक क्षमताहरू स्थिर छैन। जति धेरै मानिसहरूले हाम्रो जीनले उनीहरूलाई निर्धारण गर्छन् भन्ने सोच्दछन्, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं उच्च संज्ञानात्मक स्तरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आईडीआरए २१ अनुभूति अभिवृद्धि गर्नेहरू मध्ये एक हो जसले कसैको बुद्धिको सुधार गर्ने सर्तमा उद्धार गर्दछ।
आईडीआरए २१ का साइड इफेक्टहरू
धेरै मानिसहरु यो दबाइ को बारे मा बकवास किनभने यो कुनै साइड इफेक्ट छ। सिफारिश गरिएको खुराक संग, तपाइँ प्राय सम्भवतः कुनै पनि IDRA-21 साइड इफेक्ट सामना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। जे होस्, केहि साइड इफेक्ट को अनुभव संग सम्बन्धित छन् कि अनुभव गर्न सक्छन् nootropics वा ampakines। यस्तो IDRA-21 साइड इफेक्टहरू समावेश;
ग्लूटामेट न्युरोट्रान्समिशनको बृद्धिले अक्सर यी IDRA-21 साइड इफेक्ट निम्त्याउँछ। प्राय: जसो AMPA गतिविधि तीव्र छ र जसलाई IDRA-21 प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन उनीहरूलाई यो हुन्छ। साइड इफेक्ट, तथापि, तपाईं डराउनु हुँदैन; औषधि धेरै सम्भाव्य भएको छ, र फाइदा साइड इफेक्ट भन्दा बढि छ। तपाईं सायद तिनीहरू मध्ये कुनैबाट पनि पीडित हुनुहुनेछैन, यदि तपाईंले हालसालै स्ट्रोकको सिकार हुनुभएको छ भने, तपाईंले यो औषधि प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ किनभने यसले तपाईंको अवस्था बिगार्न सक्छ।
अध्ययन / आईडीआरए २१ मा अनुसन्धान
विगतमाका अध्ययनहरू IDRA-21 ताकतमा गरिएको छ र यो कसरी AMPA मा कार्य गर्दछ। IDRA-21 प्रयोगशाला मुन्द्रीहरूमा परिक्षण गरिएको थियो कि पानी एक भूलभुलैया पार गर्नु परेको थियो। यो अवलोकन गरियो कि मुसा प्रशासन गरिएको थियो IDRA-21 उल्लेखनीय रूपमा राम्रो प्रदर्शन छैन कि ती भन्दा तुलना। तिनीहरूले यो पहिले भूलभुलैया बाहिर निस्कन प्रमाणित गरे। युवा मकाकहरूमा भिजुअल मान्यता मेमोरीमा आईडीआरए २१ र हुपरजाइनको प्रभाव पनि यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न प्रयोग गरियो।
IDRA-21 पाउडर समीक्षा
मानसिक ध्यान र एकाग्रता बढाउँछ एडविन आर भन्छन्, "यो नोटो्रपिकले मानसिक रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्न अन्य सबै पदार्थहरुलाई पिट्छ। म यसको प्रमाणिकरण गर्न सक्दछ किनकि मैले यो लिन शुरू गरेंदेखि, मैले अध्ययन गर्ने र काम गर्ने तरीकामा धेरै भिन्नता पाएको छु। म काम पछि धेरै अध्ययन गर्छु, र विगतमा, म दुबै ध्यान दिन सक्षम भएन। म जहिले पनि एकमा असफल हुन्छु, तर आजको अवस्था त्यस्तो छैन। मेरो हाकिमले मलाई भन्दछ कि म परिश्रमी भएँ जबकि मेरो शिक्षकले भने कि म अब बढी केन्द्रित विद्यार्थी हुँ। मलाई यो तथ्य पनि मनपर्दछ कि आईडीआरए २१ ले मेरो लागि धेरै सुविधाजनक छ किनकी म एक गिलास पानीको साथ दिनको कुनै पनि समयमा लिन्छु। IDRA-21 मैले खोजिरहेको कुरा मात्र हो। ” हल्का डिप्रेसनको साथ मलाई मद्दत गर्नुभयो एस्सी जे भन्छिन्, "हालसालै मेरो तनावपूर्ण जागिर, नयाँ बच्चा र सम्पूर्ण जीवनले मलाई थकाइरहेको छ। मैले केही ड्रग्स प्रयास गरेको छु, तर कुनैले मलाई राम्रो महसुस गराउन सकेन। भाग्यवस, एक साथीले सिफारिस गर्नु पर्छ कि मैले गर्नु पर्छ IDRA-21 पाउडर खरिद गर्नुहोस् कोसिस गर्न र उदासीनता र चिन्ता आक्रमण आक्रमण गर्न। ठिक छ, यो औषधिमा केवल तीन मात्र भएको छ, र यसले राम्रो प्रभाव पार्दछ। म अब मुड स्विings्गबाट ​​पीडित बिना सबै दिन सोच्न सक्छ। म कसैलाई पनि प्रशंसा गर्छु जसले यस्तो महसुस गर्दछ कि उनीहरूले कुनै अन्त्यमा हिर्काएको जस्तो छ। ” यसले मेरी छोरीलाई बिर्सन बिर्सन मद्दत पुर्‍यायो विलियम एस भन्छन्, "मेरी छोरीसँग गम्भीर एडीएचडी छ र पाँच सेकेन्डको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि धेरै काम हो। आईडीआरए २१ पाउडर, जबकि, उनको एकाग्रता धेरै सुधार भएको छ एक जीवन रक्षाकर्ता भएको छ। उनीले पहिले भन्दा बढि सामानहरू पनि सम्झिछिन्, यस उत्पादनलाई धन्यवाद। मैले यो पनि याद गरें कि यसले उनीमा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, र यसले अझ बढी अंकहरू बनाउँछ। धन्यवाद आईडीआरए २१, मेरो बच्चा अब सामान्य जीवन बिताउन सक्छ। "
कहाँ IDRA-21 पाउडर किन्न?
लेखमा देखिए अनुसार, IDRA-21 तपाईंको जीवनलाई पूर्ण रूपान्तरण दिन सक्षम छ। तपाईंलाई अधिक उत्पादक र सतर्क बनाउने बाहेक, IDRA-21 ले तपाईंलाई खुशीको जीवन बनाउँदछ। मलाई थाहा छ अब तपाईं सोचमा परिरहनु भएको छ जहाँ तपाईं स्रोत बनाउन सक्नुहुन्छ। मानिसहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती मध्ये एकले एक विश्वसनीय IDRA-21 स्रोत प्राप्त गर्दैछ। किनभने यो उत्पादन एक दुर्लभ रत्नको रूपमा परिणत भएको छ यो विचार गर्दै यो अझै पनी यसको प्रारम्भिक क्लिनिकल अध्ययनहरूमा छ। यसको मतलब यो होइन, तपाइँ कहिले पनि गुणवत्ता आईडीआरए २१ मा हात राख्नुहुनेछैन। तपाईं सधैं गर्न सक्नुहुन्छ आईडीआरए २१ किन्नुहोस् अनलाइन र यसलाई तपाईंको स्थानमा डेलिभर गर्नुहोस्। के यसले तपाइँलाई यसका लागि सोधिएको पसलबाट पसल जानको टाउको बचाउँदैन? आज हामीलाई एक अर्डर राख्नुहोस् र अधिक प्रेरणा र सुधारिएको प्रदर्शनको लागि तपाईंको यात्रा सुरू गर्नुहोस्।
संज्ञानात्मक एन्हान्सिंग ड्रग्स, जेरी जे। बुकाफुस्को द्वारा संपादित, पृष्ठ-२-92।
एम्पाकिन्स: एम्पाकिन, सीएक्स 717१21, इद्रा -११, लाइ-503,430०,,516०, एनिरासेटम, पेपा, फाराम्पेटर, सीएक्स -१ 2010, युनिफिरम, सुनिफिराम, एलएलसी पुस्तकहरू, सामान्य पुस्तकहरू एलएलसी, २०१०, पृष्ठ १- 1-36
स्वास्थ्य र औषधिहरू: रोग, प्रिस्क्रिप्शन र औषधि, निकोला स्फेटु द्वारा
१. आईडीआरए २१ २१ पाउडर के हो?
२. आईडीआरए २१ ले कसरी काम गर्छ?
R. सिफारिश खुराक / आईडीआरए २१ का निर्देशन प्रयोग गरेर
ID. आईडीआरए २१ को फाइदा के हो?
आईडीआरए २१ को साइड इफेक्टहरू
6. आईडीआरए २१ मा अध्ययन / अनुसन्धान
7.IDRA-21 पाउडर समीक्षा
W. कहाँ IDRA-8 पाउडर किन्न?